Gabdhaha Heegan oo ku guulaystay horyaalki 6-aad ee Kubadda Gacanta Daawo Sawirro Cajiib ah
Saturday October 31, 2015 - 21:19:19 in Xiriirka Kubadda Gacanta by Nocsom Editor
Gabdhaha kubadad Gacanta Heegan iyo Horseed ayaa shalay galab ku kulmay garoonka Wiish kulanki ugu xisahaha badnaa horyaalka, waxaana usoo daawo tagay Masuuliyiinka ka tirsan qaybaha kale gedisan e isboortiga , saraakiil iyo dadweynihii ugu badnaa ee
Gabdhaha kubadad Gacanta Heegan iyo Horseed ayaa shalay galab ku kulmay garoonka Wiish kulanki ugu xisahaha badnaa horyaalka, waxaana usoo daawo tagay Masuuliyiinka ka tirsan qaybaha kale gedisan e isboortiga , saraakiil iyo dadweynihii ugu badnaa ee ciyaaraha kasoo qayblaga.
Horseed oo maanka ku haysa iyo ay guul wax ka yar aysan ku filnayn in ay ciyaar fiinaal ah dhex marto Heegan ayaa ka hor tagtay Heegan oo barbaro u baahan si ay u xaqiijiso hanashada horyaalka ,waxaana wacdaro garoonka lasoo galay Gabdhaha Horseed oo goolal deg deg ah kaga naxsaday Heegan waxaa qaybta hore lagu kala nastay 8-4 oo hogaanka ku hayaan gabdhaha Horseed.
Intii lagu guda jiray qaybta nasashada waxaa garoonka qurxiyay baambayda Booliska Soomaaliyeed oo garaacay Heesahah astaamaha qaranka kuwaa ay dadwaynihii garoonka ku sugnaa farxd geliyay iyadoo ilmo kasoo daadatay odayashii hore ee garoonka ku sugnhaa halka dhalinyarada ay sidoo kale u riyaaqeen.
Marki laysku soo laabtay Gabdhaha Heegan ay wax klasoo badlay shaxdii ay kusoo galeen garoonka tasoo keentay in ay iska barbareeyaan hoganka ciyaartana la wareegaan , basle Horsed oo doonaysa in ay ka baaqsato guuldaro kale oo kasoo gaarta Heegan ayaa soo barbaraysay waxayna ciyaarta ku idlaatay 12-12.
Waa marki lixaad oo xiriir ah oo ay Heegan ku guulaysanayso horyaalkam kubadad Gacanta Gabdhaha , halka Horseed ay marki lixaad oo xiriir ah kaalinta labaad ku dhamaysanayso.
Waaxda Warfaafinta Gos